ဘေဘီလေးက ကြက်သွန်နီ (Onions) စားလို့ရရဲ့လား - Hello Sayarwon
အစွန်အဖျား အာရုံကြောစနစ် ရောဂါများ
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 20/01/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဘေဘီလေးက ကြက်သွန်နီ စားလို့ရရဲ့လား။ ဘယ်အရွယ်မှာ စစားလို့ ရတာလဲ။ ဒီမေးခွန်းက မေမေတိုင်း မကြာခဏ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတစ်ရပ်ပေါ့။ အကြောင်းကတေ့ ဟင်းလျာ အများစုမှာ ကြက်သွန်နီ (Onions)က မပါမဖြစ်လေ။
ဒီတော့ ဟင်းတွေစားတိုင်း ဘေဘီလေးက မေမေ နည်းနည်းဆိုရင် မခွံခင် စဉ်းစားမိတာက ဒီအတွေးဟုတ်။ ဒီအတွေးလေးအတွက် အဖြေကိုတော့ ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် မေမေတို့ရေ………
ဘေဘီလေးက ကြက်သွန်နီ (onions) ဘယ်အချိန်မှာ စစားလို့ရမလဲ
ကြက်သွန်နီကို ဘေဘီလေး အသက် ၆ ပြည့်ပြီ၊ solid food စစားပြီဆိုတာနဲ့ စမိတ်ဆက်ပေးလို့ ရပါပြီ။ ကြက်သွန်နီက ဘေဘီလေးကို အခြား အစားအစာတွေလို ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်စေနိုင်ခြေက အတော်လေးကို နည်းတာပါ။ ဒါပေမယ့် အစာမကြေတာ၊ လေပွတာမျိုးတော့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို ကြက်သွန်နီ ထည့်ချက်ထားတဲ့ ဟင်းတွေကို အသက် ၆ လလောက်ကနေစပြီး ကျွေးပေးလို့ ရပေမယ့် ကြက်သွန်နီ အစိမ်းလိုက် ကျွေးတာကိုတော့ တစ်နှစ်ပြည့်ပြီးမှပဲ စကျွေးသင့်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီမှာ အာဟာရဓာတ်တွေ အနေနဲ့
ဖောလိတ် စတာတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို ကြက်သွန်နီ ကျွေးတဲ့အခါ
ကြက်သွန်နီမှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် ဘေဘီလေးကို ရောဂါတွေ အန္တရာယ်ကနေ အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကြက်သွန်နီက ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေပြီး ဘေဘီလေးကို ပန်းနာရင်ကျပ်လိုမျိုး ကျန်းမာရေးပြဿနာ ကင်းစေနိုင်သလို အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုလည်း ကျန်းမာစေပါတယ်။
ကြက်သွန်နီက သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို ကျဆင်းစေပြီး ဘေဘီလေးကို အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ နှလုံးရောဂါ မဖြစ်စဖို့ အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီမှာ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် ဘက်တီးရီးယား ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ပေးသလို ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီက ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို သံဓာတ် စုပ်ယူမှု ကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
ကြက်သွန်နီက ဘေဘီလေးတွေမှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ နှာစေးနှာပိတ် ပြဿနာကို ကင်းစေဖို့ အထိရောက်ဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်သလို ချောင်းဆိုး သက်သာစေဖို့လည်း ကူညီပေး ပါသေးတယ်။
ခုဆိုရင်တော့ ဘေဘီလေးက ကြက်သွန်နီ (Onions) စားလို့ရလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် အဖြေတော့ ရလောက်ပြီလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ကလေးတွေဆိုတာ အလွန်နုနယ်တဲ့ ပန်းလေးတွေလိုပဲမို့ ဘာအစားအစာအသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုတင်စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှကျွေးတာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဒီတော့ ဘေဘီလေး ကျန်းမာစေဖို့ရော အာဟာရ ပြည့်ဝစေဖို့ပါ solid food စစားနိုင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ကြက်သွန်နီကို နည်းနည်းချင်းစီ မိတ်ဆက်ပေးသွားလို့ ရပါတယ် မေမေတို့ရေ…..။
Health Benefits of Onions for Babies https://parenting.firstcry.com/articles/onion-for-babies-when-and-how-to-introduce/ Accessed Date 15 January 2021
Can Babies Eat Onion? Benefits, Right Age And Recipes https://www.momjunction.com/articles/onions-for-babies-age-benefits-recipes_00662810/ Accessed Date 15 January 2021
When Can Babies Eat Onions? https://www.homemade-baby-food-recipes.com/when-can-babies-eat-onions.html Accessed Date 15 January 2021
ဘေဘီလေးတွေကို ရောဂါဆိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးမယ့်အရာ
ဘေဘီလေးကို ငုံးဥ ကျွေးလို့ရလား..............
ဘေဘီလေးအတွက် လွယ်ကူတဲ့ ဗီတာမင် C စားစရာလေးတွေ ပြင်ဆင်ပေးကြမယ်။